Njengoko uyazi, amehlo ayingxenye ecacileyo ebusweni. Kodwa ngaba loo ntokazi iya kuba yinhle ngobuhle ngokudibanisa kunye ne-eyelashes emifutshane okanye encinane? Nokuba ukuba iNkosi ikuvuze nge-eyelashes ende, i-eyelashes, kufuneka ithathelwe ngononophelo. Emva kwakho konke, imihla ngemihla bahlala bebonakaliswe kwimiphumo emibi: sisebenzisa i-mascara kwi-eyelashes, sitshintshe. Njengomphumo wale "ubundlobongela", i-eyelashes ibuthathaka kwaye iqala ukuwa. Ukunyamekela kakuhle i-eyelashes kuya kuphepha le nto.
Ngaphezu koko, kukho iireyiphi eziza kunceda ukubuyisela, ukuqinisa i-eyelashes ebuthathaka, nokwandisa ukukhula kwee-eyelashes.
Ukuba awunayo ingxaki nge-eyelashes, inkqubo yokuvuselela yabo yendalo iyinto eqhelekileyo, ukunakekelwa kwenkqubo rhoqo: kusasa nakusihlwa, ukuxubha ngebhayisi, ukugcoba nge-castor okanye enye i-oyile yemifuno. Ngaphambi kokulala, i-mascara kwi-eyelashes kufuneka isuswe ngobisi lwe-cosmetic okanye i-emulsion ekhethekileyo.
Ukuba usebenzisa i-mascara engenawo amanzi, kufuneka usebenzise i-lotion yesigaba ezimbini ngeoli ukuze ususe kakuhle. Esi sixhobo sisetyenziswe kwipotton pad kwaye isetyenziswe kwikhsifi. Emva kwimizuzwana, i-mascara isuswa kakuhle. Zama ukungavumeli isikhumba ukuba sicuce kwaye solule.
Ukulahleka kwe-eyelashes kunokunyuka kubangelwa izifo ezivuthayo zamehlo, ukunyuka kwamayeza kunye nokulungiselela amachiza. Ukulahleka kwee-eyelashes kwenzeka kwakhona ekuthatheni kwamasosha omzimba. Kule meko, ukubonisana nodokotela kuyimfuneko.
Into echanekileyo enokwenziwa yonyango lokunyuka kwama-eyelashes - ngaphambi kokuba ulale embhedeni uhlambe ioli ye-eyelashes (unako isisombululo seoli ye-flax okanye ioli ye-vitamin E). Kufuneka kwakhona ukuthatha amavithamini A kunye noB.
Unyango lwonyango lokulahlekelwa kwe-eyelashes luhlala luhamba kunye nekhosi ye-physiotherapy. Le magnetotherapy, i-eyelid massage, unyango lwe-ozone. Ngenxa yonyango, inkqubo yokuvuvukala iyancipha, i-metabolism, ukujikeleza kwegazi, ukondla kwezicubu kwi-zone ye-eyelash ukuphucula, isakhiwo sayo siyaqina.
Kwiindlela zokulungisa izilwanyana ze-eyelashes, i-decoction ye-chamomile kunye ne-cornflowers yaziwa. Kunceda kakhulu ukuhlamba amehlo kunye nale nkunkuma.
Umxube obalulekileyo kakhulu we-castor, i-burdock yeoli kunye nesisombululo seoli ye-vitamin E. Ukuxuba la macandelo ngamanqanaba alinganayo kunye nokongeza ijusi ye-aloe, kufuneka uchithe le balm kwi-tube engenanto (ehlanjwe kakuhle) evela kwisidumbu. Faka isicelo kwi-eyelashes ngendlela efanayo ngendlela osebenzisa ngayo i-mascara. Faka isicelo sokuhlambulula ubusuku imihla ngemihla ngenyanga. Emva ko "khosi" olunjalo uya kuba ne-eyelashes enamandla enamandla. Ngenjongo yokuthintela, kuyakunceda ukuphinda kusetyenziswe le mpendulo ngezikhathi ezithile.
Ukuba ioli yeburdock inceda ukuqinisa i-eyelashes, ibuyisela ukukhula kweoli ye-eyelashes. Lungisa unobumba obunqamle kwioli ye-castor (1 ithispoon) kunye ne-parsley ecocekileyo. Le gruel idinga ukuxubha imihla ngemihla kwiinkophelo zeenyanga ezi-1-2.
Xa ukhetha izidumbu, ungakulibali ukuba i-mascara ayilanga nje, idibanisa kwaye iguqule i-eyelashes yakho. Kufuneka unikeze ithuba lokunyamekela ngokufanelekileyo. I-Mascara kufuneka inondle i-eyelashes. Bayafuna isidlo, njengeenwele.
Izixhobo zanamhlanje zinezithako ezininzi (iingubo, i-plasticizers, iipolymers, i-silicones) ezinokubangela ukubola. Ukulungelelaniswa neengxaki, kufuneka ufunde ngokucophelela ukubunjwa kwesidumbu xa uthengwa.
Xa uthengisa i-mascara, qiniseka ukuba ifaka i-extrak ye-silk, i-biotin, ii-vithamini A, i-C no-E. Khumbula ukuba ezinye ezi zinto zimi kuluhlu lwezithako ukusuka ekuqaleni kweluhlu, ngaphantsi komxholo wazo kwizidumbu. Khetha i-mascara efanelekileyo!
Ku luncedo ukwazi ukuba i-mascara ihlala ihamba phambi kokuba iphela iphelile. Musa ukulahla ityhubhu kwaye uhlaziye ngakumbi iinki ngotywala. Ngaphambi kokuba wenze iifowuni, faka i-tube mascara ixesha elithile kwiglasi yamanzi ashushu (amanzi akufanele angene ngaphakathi). I-wax, eyona nto iyingxenye yeso siphango, iya kunyibilika, kwaye ngokuqhelekileyo unokwenza i-eyelashes.
Ukuze ugweme izibonda ze-mascara kwi-eyelashes, akudingeki ukuba uqhube i-eyelashes kaninzi. Kudinga ukunyakaza oku-3 ukuya kwe-4 kuphela! Into ephambili kukuba ukwenze ngokukhawuleza. Ukuhlamba i-eyelashes, kufuneka ubambe i-brush uze uyiguqule kancane ukusuka kwicala ukuya kwelinye icala. Jonga ngokwakho, umphumo uyamangalisa!
Kubaluleke kakhulu ukunika i-eyelashes indawo yokuhlala enye okanye iintsuku ezimbini ngeveki. Ukunyamekela ngokufanelekileyo-isiqinisekiso sezempilo kunye nobuhle beenyawo ezintle zamehlo.
Kutheni abafana bengayinanga?
I-mesotherapy ye-oksijini njenge-serum yesikhumba
Iindlela eziphambili kwi-cosmetology ye-esthétique
Ukwenza kakuhle kwi-style kaPaulina Andreeva: iklasi yeklasi kunye nesithombe
I-Anesthetic ye-plastic surgery
I-cheese casserole kunye nenyama kunye namazambane
Ukuchonga kunye nokubandakanya - ezedlulileyo kunye nezikhoyo
UAna Kalashnikova kunye neProkhor Shalyapin kunye kunye - i-opera ye-sopho engapheliyo
I-Technique yoqeqesho lwe-autogenic
IHoroscope yintombikazikazi ngoJuni 2017
Isityalo esingaphandle saseMarantha